Philips 8807 Ambilight TV ndiyo yazvino kunzi "Iye Iye"
TV nyowani muPhilips '"Iyo" Performance Series yakaziviswa.
The Philips 8807 TV yakagadzirirwa kupa akanakisa maficha asi inochengeta zvinhu zviri nyore kune vatengi kusanetswa neyakajairwa TV tech jargon.
Inoshandisa 120Hz LCD pani ine LED backlighting, ine matatu-mativi Ambilight uye inouya mune matanhatu saizi: 43-, 50-, 55-, 65-, 75- uye 86-inches. Iyo yekupedzisira iyo saizi nyowani yePhilips TV.
Pachave zvakare neiyo 60Hz modhi kune avo vane bhajeti rakasimba.
Iyo TV inotsigira Dolby Vision, HLG neHDR10+, ine HDMI 2.1 inoenderana neARC, VRR, FreeSync Premium uye Auto-Low-Latency mode (ALLM), uye inoratidzira chimiro chitsva cheGame Bar kupa vatambi mukana nyore kune akasiyana marongero mu-pop-up menyu.
Inotsigira Dolby Atmos uye inouya ne stereo down-firing speaker akavakirwa-mukati. Ivo vanokwanisa kurova kusvika ku20W yeakasanganiswa system simba.
Iwe unogona zvakare kuwedzera vamwe vatauri kune kuseta, kusanganisira yakaziviswawo Philips B8507 3.1 soundbar, kuwedzera ruzivo. Uye, iyo seti inofambiswa neDTS Play-Fi tekinoroji saka inogona kushandiswa sechikamu chemultiroom, isina waya yekuseta.
Tichiri kumirira mitengo uye ruzivo rwekuwanikwa.
Philips 805 (65OLED805) ongororo: Inodhura OLED kugona
Filips 4K HDR TV sarudzo kana ichienzaniswa: OLED + 934, 984, OLED 805, 855, 8804 nezvimwe
Philips OLED + 935 ongororo: Ruzha uye chiratidzo chinoshamisa
Yakanakisa soundbar uye soundbase 2020: Kudza yako TV terevhizheni